PhotoStudy Download - တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုအကူအညီ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » PhotoStudy - တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုအကူအညီ
PhotoStudy - တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုအကူအညီ APK ကို
တစ်အိမ်စာပြဿနာပေါ်သောင်တင်တစ်ခုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့လာနေနှင့်ချက်ချင်းအကူအညီလို? 24 × 7, အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို - ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်လိုအပ်တဲ့အခါသင်သင်္ချာ, ရူပဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒအကူအညီနဲ့အာမခံသောတစ်ခုတည်းသော app ကိုပါပဲ။ ! ကျနော်တို့ခဏစက္ကန့်အတွက်လေ့လာကျွမ်းကျင်သူ ချိတ်ဆက်. ကလွယ်ကူသင်ပိုပြီးအခမဲ့အချိန်လျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်အကူအညီနဲ့လေ့လာများနှင့်အမှတ်ကောင်းရရစေ:
1 ။ သင့်ရဲ့အက္ခရာသင်္ချာ, ဂျီသြမေတြီ, Trig, ကဲကုလသင်္ချာ, ရူပဗေဒ, ဓာတုဗေဒ, ACT သို့မဟုတ် SAT သင်္ချာအိမ်စာပြဿနာတစ်ခုပါ pic SNAP ။
2 ။ တစ်စိတ်ကြိုက်, 10 မိနစ်ချက်တင် session များအတွက်စက္ကန့်အတွက်လေ့လာကျွမ်းကျင်သူနည်းပြဆရာချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်သောလေ့လာမှုကျွမ်းကျင်သူများကသငျသညျကားချပ်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးညီမျှခြင်းအပါအဝင်ပြဿနာများကိုပင်အခက်ခဲဆုံးအမျိုးအစားများ, ဖြေရှင်းကူညီပေးသည်။ သင်၏ Study ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အချိန်ပိုမိုလိုအပ်ပါသလား? အခမဲ့ကျူရှင်နောက်ထပ် 10 မိနစ် Get - ပဲသင်၏ချတ် session ကိုကြီးစွန်းရှေ့၌သင်တို့လေ့လာကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ။
3 ။ သင်တစ်ဦးအမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံကျူရှင်ကို chat session သမိုင်းကိုဝင်ရောက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလေ့လာကျွမ်းကျင်သူကျူရှင်ဆရာများသည်တစ်ဦးလေ့လာမှုကျွမ်းကျင်သူနည်းပြဖြစ်လာမယ့်ကိုတိကျခိုင်မာစွာသင်တန်းနှင့်အရည်အချင်းများလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားပါ။ သူတို့ကသငျသညျအပြည့်အဝငျသညျသင်ယူနေသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်အထိသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သင်မည်သို့ tutoring ဆုံးမဩဝါဒပေးဂရုစိုက်။ သူတို့တစ်တွေလေ့လာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာပြီးတာနဲ့သူတို့အဆက်မပြတ်သူတို့ကျူရှင်၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူဆက်လက်သေချာစေရန်စာရင်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာကျွမ်းကျင်သူများကအားလုံးသင်္ချာသို့မဟုတ်သိပ္ပံအတွက်ကောလိပ်ဒီဂရီရှိသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်လာ - ဆရာကနေအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးမှထုတ်ကုန်မန်နေဂျာနှင့်ပိုပြီးရန်။ ငါတို့သည်သင်တို့လက်ျာဖြေရှင်းချက်အရလိမ့်မယ်အာမခံ!
အထက်တန်းကျောင်း, ကောလိပ်တက္ကသိုလ်, အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်နှင့် homeschooled ကျောင်းသားများကို PhotoStudy နှင့်အတူအမှတ်ကောင်းရ။ ရှေ့ပြေးသို့မဟုတ်အဆင်မပြေအချိန်ဇယားဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်မဟုတ်ပါ, ကိုယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးနှငျ့သငျချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကျွမ်းကျင်သူများကတချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်!
*** အသစ် ***
မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျောင်းကဖုံးလွှမ်းခေါင်းစဉ်အသစ်သင်ယူခြင်းကိုကူညီမလိုအပ်သလား? PhotoStudy အကယ်ဒမီမဆိုသင်္ချာ, ရူပဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒခေါင်းစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟု 750 သင်ခန်းစာများကျော်ရှိပါတယ်! သင်ခန်းစာများကိုလီ, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြန်အလှန် stem သင်ကြားမှု bot တစ်ကောင်အားဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်ကြသည်! သင်ခန်းစာအစားဗီဒီယိုတစ်ဦးကို chat session မှတဆင့်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကချက်ချင်း load, အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လက်တွေ့မပါဒေတာကိုသုံးပါ! တစ်ခုခုသင်ခန်းစာအတွက်မဆိုအချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးလျှင်သင်တစ်ဦးထက်ပိုအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်အဘို့အလီကိုမေးနှငျ့သငျဆက်လက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါကသိစေနိုငျပါသညျ!
* ကျောင်းသားများမတ်ေတာသ PhotoStudy *
သင်တစ်ဦးသင်္ချာစာသင်ခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် "ဤသူသည်သင်တို့ကို download လုပ်ပါနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံး app ကိုပါ! ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ။ သူတို့ကပဲသူတို့ကဖြေရှင်းပေးဖို့သင်မည်သို့ဆုံးမသွန်သင်သင်အဖြေကိုမပေးပါဘူး။ "
"ကျွန်မလုံးဝဒီ app ကိုချစ်ကြတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ငါ့ကိုအဖြေကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတဆင့်ကျွန်မကိုလမ်းလျှောက်တစ်ခုလုံးကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုရှင်းပြပါဦးမည်သာ။ ငါကရမှတိုင်းကျောင်းသားအားပေး! "
"ဒီ app များအတွက်ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ကစာသားတစ်ဦးဘဝကိုချွေတာပါ! ငါမည်သူမဆိုအဲဒါကိုငါ့အရေသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်မည်မျှကြိမ်ဖြစ်ပြီးမည်ကဲ့သို့အသုံးဝင်သဘောပေါက်စဉ်းစားကြဘူး! "
ငါဒီ app ၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါလျှင် "ငါသည်သင်တို့ကိုကြီးမားတဲ့ပွေ့ဖက်ပေးပါလိမ့်မယ်! သငျသညျဤမျှလောက်ငါ့ကိုမကူညီပေးခဲ့သည်အနည်းဆုံး 99% သောငါ၏စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချပါပွီ။ ငါမသာသငျသညျအကြှနျုပျကိုအဖြေပေးကြောင်းကိုချစ်ပေမယ့်သူကရမယ့်ခြေလှမ်း-by-step လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာ! "
"ငါသည်ဤကဲ့သို့သောများစွာသော apps များ download လုပ်ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်ငါကဒီဝေးနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ ငါလုံးဝဒီ app ကိုချစ်! ငါပြီးသားကြောင့်ထိုသို့ပြု၏အမှန်တကယ်ကောင်းသောအဆင့်လာပြီပေါ့။ "
ဒီ app ကိုတွေ့ပြီဖို့ "ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများကအလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါ။ "
ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုနောက်ဆုံးထွက် updates တွေကို Instagram ကို / Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာကဲ့သို့ပင်:
မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အဘို့, support@gotitapp.co မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
PhotoStudy - တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုအကူအညီ
14.60 ကို MB
QANDA: 5s သင်္ချာ ...
အင်္ဂလိပ် Grammar ...